आज २०७६ माघ १२ गते आइतबारको राशिफल – Khabar Silo
Posted on January 26, 2020 Author admin Comment(0)
आज २०७६ माघ १२ गते आइतबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
आज,कार्तिक ११ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस
मंगलबार व्रत बसेर पूजा आराधाना गर्दा धन सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसो भए धन प्राप्तीका लागि मंगलबार के गर्ने त रु धर्मशास्त्र अनुसार, तपाईंले मंगलबारको दिन हनुमानको पुजा आराधना गर्नुभयो भने तपाईंलाई आर्थिक लाभ मिल्छ ।सकेसम्म मंगलबारको दिन कुनैपनि हनुमानको मन्दिरमा गएर हनुमान चालीसाको पाठ गर्दा आर्थिक सम्पन्नता बढेर जाने धार्मिक विश्वास छ […]
Posted on January 28, 2021 Author khabar silo
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल माघ १६ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२१ जनवरी २९ तारीख माघ कृष्णपक्ष प्रतिपदा तिथी अष्लेषा नक्षत्र आयुष्मान योग बालव करण चन्द्रमा कर्कट राशिमा आनन्दादि योगमा मृत्यु योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु शहीद दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारीवरिक […]
माता पाथिभराले हामी सबैको रक्षा गरुन्, हेर्नुस् फाल्गुन ९ गते शुक्रबारको राशिफल
मेषः– पूर्ण शान्तिको बातावरण अझै बन्ने छैन । फाइदा हुने काम कम हुनेछन् । काम गर्दा अरुको भनाई खानु पर्ने अवस्था आउन सक्छ सजग रहनुहोला । अरुलाई सहयोग बढि हुनेछ । फलदायी यात्राको सम्भावना देखिन्छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी भने नबढाउनु होला । व्यापार व्यवसायबाट थोरै आम्दानी हुनेछ । वृषः– आज पनि सयमले साथ दिने […]